Warshadda Ribbon - Soo -saareyaasha Ribbon ee Shiinaha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Ribbons -ka si baaxad leh ayaa loo adeegsadaa sida qeyb muhiim u ah biladaha. Ribbons -ka waxaa lagu bixin karaa waxyaabo kala duwan sida polyester, kala iibsiga kulaylka, dunta, nylon iyo iwm.Waxay ku xiran tahay doorashada macmiilka iyo sida astaanta loo qori doono. Haddii astaanta ay leedahay midabyo baaba'ay, kuleylka la soo wareejiyo badiyaa waa la doortaa kaliya ma aha qiimaheeda tartanka, laakiin sidoo kale dusha sare ayaa ka jilicsan. Astaanta ku taal lanyard -ka polyester -ka badanaa waa daabacaadda silkscreen ama daabacaadda CMYK. Xirfadaha suufka ama nayloon inta badan lama doorto iyadoo la tixgelinayo qiimaheeda guud. Cabbirka caadiga ah ee xargaha waa 800mm ~ 900mm. Mararka qaarkood macaamiishu waxay doorbidaan dherer dheer, taasi waa la soo dhaweynayaa. Marka laga reebo walxaha xargaha iyo astaantiisa, qayb kale oo muhiim ah oo xargaha waa tayada tolidda. Si loogu xiro biladaha, waxay noqon kartaa V tolan ama H tolan. H tolida uma baahna qalabka birta, halka V -tolidu u baahan tahay giraanta ribbon & giraanta boodada si loogu xiro xargaha iyo billadaha. Tayada tolitaankeenna waxaa dhammaystay shaqaalaheenna khibrada leh, taas oo xaqiijin karta tayada tolidda sare. Sida bixiye hadiyad dhiirrigelin xirfadeed, waxaan ku siin karnaa dhammaan badeecadaha la dejiyay oo ay ku jiraan xirxirida. Waxba ha isku xirin si aan u iibsano marooyinka kaliya ama inaan iibsano badeecada oo dhan oo ay ku jiraan biladood, labaduba waa la soo dhaweynayaa. Waxaan u nimid inaan sugno weydiimahaaga.